MIDHAHA DIINTA: Muxuu yahay Fiqigu? Maxaa se Shuruud Looga Baahan yahay Qofka Baranaya? | Gacanlibaaxnews
MIDHAHA DIINTA: Muxuu yahay Fiqigu? Maxaa se Shuruud Looga Baahan yahay Qofka Baranaya?
April 7, 2017 - Written by maamule
Waxa dhici karta in dad badani aanay si fiican uga dheragsanayn sharaxaadda waxa uu yahay FIQIGU iyo weliba haddii uu qofku baranayo shuruudaha looga baahan yahay waxay.
Weydiinta kor ku xusan waxa si huwan uga warcelinaya sheekh Maxamed Cali Gadhle oo ka mid ah culimga si wanaagsan u yaqaanna, isla markaana dhiga oo dadka bara FIQIGA, kuna nool magaalada Hargeysa.
Waana qodobka aad doorkan kaga bogan doontaan “Midhaha Diinta”. Ka faa’idaysi wanaagsan.
Sheekh Maxamed na ilaahay ajar iyo xasanaad ha ka siiyo. Cilmigana ha u barakeeyo.